» कलैया उपमहानगरपालिकाले खर्च विवरण पुरै नदिए कानुनी बाटो रोजिन्छ
कलैया उपमहानगरपालिकाले खर्च विवरण पुरै नदिए कानुनी बाटो रोजिन्छ
बारा । स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गरिएको रकमको विवरण कलैया उपमहानगरपालिकाले उपलब्ध नगराएको युवा समुह कलैयाले जनाएको छ ।
आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी समुहले आफुले माग गरेकोे सुचना उपमहानगरपालिकाले उपलब्ध नगराएको जनाएको हो । समुहले सम्मेलनमार्फत आफुले मागेका सुचनाहरु उपलब्ध गराउन समेत आग्रह गरेकोे छ ।
उपमहानगरपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ५७ लाख ४७ हजार ४ सय ८ रुपैयाँ खर्च गरेको मात्र सुचना दिएपनि त्यसको बिल भरपाई भने नदिएको युवा समुहको अगुवा डा. सुसिल साहले बताए ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा २ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नका लागि बोर्ड बैठकबाट पास गरिएकोमा मात्र ५७ लाखको सुचना दिएको र बाँकीको लेखाजोखा नराखिएको साहले बताए ।
कोभिड-१९ को संक्रमण सुरु भएपछि गरिएको खर्चको विवरण २०७७ साल असोज ११ गते सुचना मार्फत माग गरिएकोमा ४ दिनमा सुचना दिन्छु भनेर तोक लगाएका फाटवालाले २१ दिनपछि पनि अपुरो सुचना दिईएको भन्दै साहले सुचना दिन ढिलाई गर्नुका साथै अपुरो हुँदा यसले आफैँमा प्रश्न चिन्ह खडा गरेकोे छ ।
नागरिकलाई सुचनाको हकबाट बंचित गराउनु कानुनको उल्लंघन भएको हुँदा कुनै बहनाबाजी नगरि सहज रुपमा बाँकी सुचना उपलब्ध गराई दिन सरोकारवाला निकायसँग आग्रह गरिएको छ ।
नर्मल थर्मोमिटर प्रति सिप २ सय, सर्जिकल माक्स ७५ रुपैयाँ ५० पैसा, ग्लोभ्स प्रति पिस २ सय २० खरिद गरिएको सुचना दिएको भएपनि बजारमा प्रति पिस नर्मल थर्मोमिटर १ सय, सर्जिकल माक्स ५ रुपैयाँ, ग्लोभ्स ४५ रुपैयाँमा पाउने गरेको साहले बताए ।
मेस खर्चमा २० लाख, भिडियम खर्च १२ लाख देखाए पनि कहाँ कहाँ खर्च गरिएको हो सोको बिलसहितको विवरण नदिएकोलेे पुरै सुचना उपलब्ध नगराए कानूनी बाटो रोज्ने डा. साहले भनाई छ ।
त्यत्ति मात्र नभई पिपिई १ सय २० थान, रैनकोट १ सय थान खरिद गरेको विवरण दिए पनि कहाँबाट खरिद गरेकोे भन्ने नखुलाएको र बिल पनि नदिएकोले यसको पछाडी केही रहस्य रहेको समुहको ठहर छ ।